အိမျဘေးက မမကွီး - Owl Myanmar News
ကနြျော နာမညျက ကြျောမငျး …အသကျက ၁၆နှဈ…တောသားတယောကျမို့ လူကောငျထှားတယျ…ကြောငျးက ခုမှ ၈တနျးတကျနတေုနျး…ကြောငျးပိတျရကျ တောငျယာ လယျလုပျငနျးမှာလုပျကိုငျကူရငျး စီနီယာနှားကြောငျးသားမြားရဲ့အတငျးဝိုငျးဝနျထုပေးမှုကွောငျ့ ဂှငျးကောငျးကောငျးတိုကျတတျနပွေီ… ပွီးတဲ့အရသာကိုသိပျမသိသေး လရညျထှကျရငျ ကငျြတယျဆိုတာပဲသိထားတော့ ဂှငျးလဲမထုလိုဘူး…. ဂှငျးမထုပဲလရညျထှကျရတဲ့အရသာက အိပျမကျထဲမှာ… ကနြျောတို့အိမျဘေးက အမက အသကျ၃၀လောကျရှိပွီး ခလေးနှဈယောကျအမေ ခလေးမှေးပွီး ၅နှဈလောကျကွာပွီဆိုတော့ ရငျကားတငျကားနဲ့ ဖှံ့ထှားလှတယျ…ကနြျောလို့လူပြိုပေါကျ တယောကျအတှကျတော့ မှနျးထုစရာ မမကွီးပေါ့ဗြာ….မိသားစုခငျြးကလဲရငျးနှီး တရှာတညျးသား အမြိုးတောငျကငျးမကငျးမသိဘူး….အဲ့အခြိနျက Videoရုံမှာ တယောကျတရာ နှဈရာပေးကွညျ့ရတဲ့ခတျေ….ကိုယျကလူငယျဆိုတော့ကြောငျးပိတျရကျ videoရုံကိုအစောကွီးသှားနရောယူ ကာထိူငျပွီး ကာလာအိုကေ သီခငျြးတှကွေညျ့နရေငျး ဘေးနာ အမကွီးရောကျလာက ထိုငျကွညျ့နတောပေါ့…တစတစလူမြားလာတော့ ကိုယျကလကျကိုနရံဘေးကပျ ပကျလကျမဟုတျကြောမှီမဟုတျပုံစံကွညျ့နတေုနျး…အမကသူ့တငျပါးကွီးနဲ့ထိမိဖိမိလုနီးပါ နံရံကိုမှီကွညျ့နတောနဲ့ကွုံတော့ ဖိုမသဘာဝ ကနြျောသှေးတှဆေူလာတယျ…
အမဖငျကွီးက အိစကျပွီး ထိနတောတောငျခှာမိသှားမှာကွောကျတဲ့အထိ အရသာခံနရေငျး ဇာတျကားကိုအာရုံမရောကျတော့ဘူး….တပိုငျးပွီးတော့ကနြျောအိမျပွနျပွေးလာမိတယျ…အိမျသာထဲထုမလို့ ကနြျောအိပျတာက အိမျရှရေ့တှေငျးကိုမိုးထားတဲ့ ဖကျမိုစထရံကာ အခနျးထဲမှာ ကနြျောခွရေငျးမှာရတှေငျး အမကကနြျောတို့ရတှေငျးမှာနတေို့ငျးရခြေိုးပွီး သူ့ထဘီနဲ့အတှငျးခံပငျတီတှကေို သူ့ခွံထဲကရတှေငျးနဲ့ကပျလကျြ ခွံစညျးရိုးဘေးလှနျးနကွေ…အခါတိုငျးသတိမထားမိပမေဲ့ ကနြျောခုနက feelကွောငျ့ထှကျနတေဲ့အရညျတှကေိုရဆေေးရငျ မီးရောငျအောကျမှာ အမ ပငျတငျကွီးဖှေးခနဲတှလေို့ကျရတယျ….ကနြျောသှေးတှဆေူပှတျလာပွီး ပတျဝနျကငျြကိုအကဲခပျလိုကျတော့ တိတျဆိတျငွိမျသကျ….ကနြောကျခွံစညျးရိုးပေါကျကနေ လကျနှိုကျပွီးအမပငျတီကို ယူက ကနြျောအခနျးထဲ ပွေးဝငျခဲ့မယျတယျ….အခနျးထဲရောကျတော့ ပငျတငျကို ဖွနျ့ခလြိုကျပွီ အမစောကျဖူတျနရောနားကို နနျးကွညျ့မိတဲ့အခြိနျမှာ. ကနြျောလီးဟာတဆကျဆကျတုနျနပွေီ…တနကေုနျဝတျထားပွီး မလြျောပဲခြှတျတငျထားတာထငျတယျ…စောကျဖုတျနဲ့သငျးသငျးလေးက ကနြေျာ့ဘဝပထမဆုံးအရသာကိုခံစားဖူးတဲ့အနံ့ …လြာနဲ့ယကျကွညျ့လိုကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ အဖွူ အဖတျလေးတှယေေးယေးမွငျရပွီး ဘာအရသာရယျမပွောတတျပမေဲ့ ကနြျောသှေးတှဆေူပှတျလာပွီ…စောကျဖုတျနရောတခုလုံးကို ကနြျောလြာနဲ့ယကျရငျး ပါးစပျကလဲအမကိုမွငျယောငျကာ ထုနလေိုကျတယျ….အရမျးကောငျးပွီးပွီးခါနီးမှာတော့ အမရဲ့ပငျတငျအဖုတျနရော ကိုကနြျောလရညျတှေ အမြားကွီးပနျးထညျ့လိုကျတာပေါ့….ခဏဇိမျယူပွီး အမပငျတီကိုသူ့နရောသှားပွနျထားကာ အိပျပြျောသှားတော့တာပဲ….
နောကျနကြေ့ သူ့သားအကွီးကောငျက ကိုကွီး အမကေ ညကရြငျအိမျမှာအဖျောလာအိပျပေးဦးတဲ့….တကယျတော့ အဲ့အခြိနျကတအိမျနဲ့တအိမျကမဆကျသေး….ယောကျြားတှတေျောတျောမြားမြားကတောတကျသဈခုတျကွတာ တခေါကျကို၅ရကျတပတျကွာတတျတယျ…လကျနကျကိုငျတှသေူပုနျတှမေသိအောငျ ညဘတျ၁၁နာရီနောကျပိုငျးမှရှာကထှကျတတျကွတယျ…အမက သူရဲကွောကျတတျတော့ သူ့ယောကျြား မသှားခငျ ကိုကအဖျောကွိုသှားထားပေးရတာ…ထုံးစံအတိုငျးပဲvideoကွညျ့ပွီးပွနျလာတော့ ၉နာရီလောကျရှိပွီ…ကနြျောနဲ့သူ့သား အကွီးကောငျက ခွငျထောငျတလုံးနဲ့အမတို့ခေါငျးရငျးမှာ…အမနဲ့သူ့သမီးလေးရယျ သူ့ယောကျြား ရယျက ခွရေငျးကပျလကျြခွငျထောငျတလုံး…..
အိပျခါနီးမီးခှကျမှုတျငွိမျသှားကွခြိနျကိုယျကမအိပျနိုငျသေးပဲ အမကို မွငျယောငျကာ ကနြျောလီးကိုဆှနမေိတယျ….လူပြိုပေါကျဆိုတော့ လဥက ဂြှတျဆိုတဲ့အရာကလဲလှတျခှာလို့ကောငျးတာပေါ့ဗြာ ဆယျနာရီခှဲလောကျနတေော့ အဟနျ့အဟနျ့ …အမခြောငျခွောကျတခကျြဆိုးပွီး…သားကွီးရေ…သားရဟေု.ချေါပွီး ကနြျောနာမညျကိုပါချေါတယျ..ကနြျောကို့က ငမငျးဟုသာ ချေါကွတာ. အိမျနားကလူတှကေ …မထူးပဲနတေော့ မချေါတော့ပဲ ခဏနတေော့ အမတို့ခွငျထောငျထဲက တဖကျဖကျ အစှပျစှပျအသံတှထှေကျလားတော့တာပဲ…ဟဲ ဖွေးဖွေး… အားနာတယျ…ခြောငျးဟံသံအဆုံးမှာတော့ အိမျလှုပျခကျြနညျးနညျးပိုယိုငျးကာ ငွိမျကွသှားပါတော့တယျ….ခဏနတေော့အမ အပေါ့ထသှားတာ မွငျလိုကျတယျ…အမက ကွောကျတတျတယျ.အပေါ့သှားရငျ ညဘတျ အိမျခနျးထဲမှာပဲပေါကျတာ…အမအပေါ့သှားပွီးဆယျမိနဈလောကျကွာတော့ သူ့ယောကျြားထလာကာ နှားကောကျပွီးတောတကျသှားတော့တာပေါ့….ကနြျောအဲ့ကတညျးက အမွဲလိုလိုအမကိုပဲမှနျးထုဖွဈတယျ. နောကျဆယျရကျလောကျနတေော့ အမယောကျြား အလုပျထှကျမယျဆိုပွီးဖားကနျ့ဘတျ တကျသှားတယျ.အဲ့ကတညျးက ညတိုငျးအိပျပေးဖျောဖွဈသှားပွီး ညဆို ဘယျသူမှမရှိရငျ ကို့အိပျယာကိုဝငျအိပျနတောပဲ…အမရခြေိုးရငျခိုးကွညျ့လိုကျ သေးပေါကျရငျ လိုကျခွောငျးလိုကျနဲ့ ကနြျော ၁၇နှဈပွညျ့တော့မယျ လူပြိုရညျမပကျြသေး….
တနအေ့မက အိမျသာသှားခငျြလို့အဖျောချေါတာ ကနြျောလဲ ဗိုကျနာနတောနဲ့ အဖျောလိုကျပေးရငျး အမက တံခါးမပိတျဘူး …မီးမှိတျထားပမေဲ့အမပေါငျလုံးကွီးတှေ ဆီးခုံကွီးတှကေ လရောငျအောငျ ရေးရေးလေးမွငျရငျ ကနြျောလီးတောငျလာတယျ အမတို့အိမျသာက နှားတငျကုတျဘေးဆိုတော့ ကနြျောဘဲ ရကောတုနျးပျေါ ဘောငျဘီခြှတျရငျ လီးကိုကစားနမေိတယျ….ကံကောငျးခငျြတော့ အဲ့ခတျေက အင်ျဂလိပျ ဆေးထဲ့တဲ့ ဘူးအဖွူးလတှေတေ့ယျ..ဖှငျ့ကွညျ့တော့ဘာမှမရှိ ပွောငျစငျလို့. ကနြျောကနြျောလီးမနိုးတနိုးလေးကိုထညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ အတျောပဲဗြာ အပေါကျနဲ့ကနြျောလီးက လီးလဲတောငျလာရော ထုတျမရတော့ပဲ လခေိုသလိုဖွဈပွီး တဘတျဘှတျမွညျနတေော့တာ… သေးလိုလိုအရညျတှလေဲကနြေျာ့လီးကထှကျနတေော့ စောကျဖုတျကိုလီးနဲ့လိုးနသေလို ဖှတျဘှတျဗွဲဗွဈနဲ့အသံကိုစုံနတောပဲဗြာ ..အမှောငျရိတျကနေ အမ ကိုစမျးတဝါးဝါးငေးကွညျ့ရငျး ကနြျော အခကျြပေါကျး၃၀လောကျအသံစုံနဲ့ထုပွီးခြိနျမှာတော့ ကနြျောလရညျတှဘေူးထဲပနျးထုတျလိုကျတယျ…အမ ကအိမျသာတကျပွီးလို့ကနြေျာ့ကိုခပျလှမျးလှမျးမှာစောငျ့နပွေီ..ကနြျောလဲရှကျရှကျနဲ့မကျြနှာကွီးရဲကာ အမနောကျကလိုကျပွနျသှားပမေဲ့အမက မသိသလိုပဲ….မနကျအိပျယာနိုးတော့ အမက နှားတှဆှေဲထုတျနပွေီ ကနြျောအပေါ့သှားရငျ ပွနျအလာ ဟိုကောငျလေး ညကဒီနားမှာဘာထိုငျလုပျနတောလဲ အီးပါထားတာလဲမတှဘေူ့း ဒီဘူးထဲက နှပျခြေးရညျတှပေဲတှတေ့ယျတဲ့… ကနြျောက မသိဘူးလဆေိုတော့…နငျလူပြိုဖွဈနပွေီထငျတယျ….
ကောငျမလေးတှလေိုကျပွောလတေဲ့….ဒီလိုနဲ့ဆယျရကျလောကျအထိ ရှကျရှကျနဲ့နပေမေဲ့ အမ ခြှတျထားလြျောထားတဲ့ပငျတီတှခေိုးနမျးပွီးထုမိနတေုနျးပဲ…တနတေ့ော့ ခေါငျးနပနျးကွီးသှားရတယျ..ကနြျောနဲ့အိပျတဲ့အမသားကွီးသူ့အဖှားအိမျသှားအိပျတော့ ကနြျောအမပငျတီကွီးအိပျယာထဲထိ ယူလာတာ… အမပငျတီကိုကနြျောဝတျထားပွီး အမအဖုတျနရောကိုလီးနဲ့တပွေီ့းထုလိုကျတာ လရညျတှအေမြားကွီးပဲ.အမက videoကွညျ့နတေော့လှတျလပျတာပေါ့ထုပွီးထဘီတနျးကိုသှားလှနျးပွီးပွနျအလာ videoပွီးလို့ပွနျလာတဲ့လူတှနေဲ့ကပျသီလေ…ဟူး ကံကောငျးလို့…. ကနြျောအိပျယာထဲအိပျခငျြယောငျဆောငျနတေုနျး မိုးခြိနျးသံကွားလိုကျတယျ….အမအဝတျတှရေုတျပွီးပွနျအတကျလာ …ခုန ထုထားတယျဘောငျးဘီပါပါလာတာပေါ့ဗြ….မီးရောငျအောငျအဝတျထိုငျခေါကျရငျး သူ့ဘောငျးဘီက လရညျတှကေိုတှပွေီ့း ဟယျ ဘာတှလေဲမသိဘူး ငါညနကေမှလြျောထားတာပါ….ငမငျး ဘယျသူတှလောသေးလဲမလာဘူးလအေမ ဘာလို့လဲ….ကနြျောလရညျတှကေို လကျနဲ့တို့ပွီးနနျးကွညျ့တာခွငျထောငျထဲကနမွေငျနရေတယျ…
ခဏငွိမျသှားပွီး….မိုးသညျးမဲစှာရှာပါလရေော…ငမငျး နငျ့ညီပွနျမလာလောကျတော့ဘူး..နငျတို့အိပျယာလဲမိုးယိုနတေယျလေ….လာဒီခွငျထောငျထဲလာအိပျ….ခွငျထောငျကွီးဖွုတျထားဦးတဲ့… အမက တောငျးရမျးယူထားတာ…ခနျးဝငျခွငျထောငျကမ မဝငျရပဲ အလညျက ခှဲပွီးဝငျရတဲ့ပုံစံလေး ကယျြလဲကယျြတယျ…. ကနြျောက ခွငျထောငျနားကပျအိပျတော့ အမနဲ့ကနြျောကွား ဘာမှမခံထားပမေဲ့ တထောငျ့ထှာလောကျကှာနတောပေါ့….အသကျရှူသံပွငျးပွငျးနဲ့ကြိတျမှတျအိပျခွငျရောငျဆောငျနပေမေဲ့ မအိပျပြျောဘူး….အမဖငျကွီးကိုပဲမွငျယောငျနတေယျ….အမကတညကိုနှဈခါလောကျသေးထပေါကျတတျတာသိတော့ ကနြျောအရဲစှနျ့ပွီး ပုဆိုးဂှငျးလုံးခြှတျပွီး မကျြလုံးမှိတျအိပျခငျြယောငျဆောငျနတော…မကွာဘူး ၁၅မိနဈလောကျနတေော့ အမ မီးခွဈခွဈသံကွားတယျ…ဖယောငျးတိုငျထှနျးပွီး ကနြျောဘတျတခကျြလှညျ့ကွညျ့ပွီးအိမျခနျးထဲတဗွောဗွော တရှဈရှဈ သေးပေါကျပွီး ခွငျထောငျထဲပွနျဝငျလာတော့ သူ့သမီးကိုစောငျသခြောခွုံ ကာ ကနြျောဘတျလှညျ့ထိုငျနတောပဲ…
ဖယောငျးတိုငျကိုအပွငျမှာထှနျးခဲ့တော့ ခွငျထောငျထဲ အလငျးရောငျက မှိနျပမေဲ့ရှငျးတယျ….ကနြျောကနဖူးပျေါလကျတငျအိပျနကေဆြိုတာသိတော့ အိပျခငျြယောငျဆောငျတာအမမသိဘူး… ကနြျောထောငျမတျနတေဲ့လီးကိုကွီး ပုဆိုး အုပျပေးသလိုနဲ့မသိမသာပှတျဆှဲသှားတယျ…ကနြျောရငျတှတေအားခုနျနပွေီ. အမ ငါ့ဟာကွီးမွငျသှားပွီဆိုတဲ့အသိနဲ့တငျ…ပှတျဆှဲသှားတုနျး ကနြျောလီးထိပျက အရညျကွညျလေး အမလကျကိုစိုသှားတယျထငျတယျ… လကျက အရညျစကျလေးကိုနနျးကွညျ့နတော ပွီးတော့လြာလေးထုတျပွီး ယကျကွညျ့ရငျး အမ မကျြလူံးတှေ အရောငျလဲ့နတော ခုမှမွငျဖူးတာ…ခဏနတေော့ကနြော့ကို အိပျမအိပျသခြောအောငျ လှုပျကွညျ့တာပဲ…ကနြျောလဲလုံးမမလှုပျမှ အမ ပုဆိုးကိုပွနျဖယျပွီး ကနြျောလီးကိုငုံပွီးစုပျတော့တာပဲ… မိုးလဲဆဲစမို့ အသံက တပွှတျပွှတျနဲ့ ကနြျော တခါမှမခံစားဖူးတော့ ကွိမျးလာပွီ… နာလဲနာတယျတခါခါ …အမက ခဏနတေော့ ထဘီခါးမှာပတျပွီး ကနြော့ကိုကြောပေးပွီးအပျေါကနေ တကျခှတော့တာ့ပဲ… ခလေးနှဈယောကျမှေးထားတဲ့အမ အဖုတျက မကွပျတော့ပမေဲ့ မခြောငျနဘေူး …
ကနြျောလီးကလဲ အရမျးကွီးမကွီးပမေဲ့ ကြားခေါငျးဓာတျမီးထကျတော့ကွီးတယျ…ရှညျလဲရှညျတော့… မသိသာဘူး..အမ ခေါငျးကို မော့ပွီးအသံမမွညျအောငျ ပှတျကာ ရှနေ့ောကျဆောငျ့နတော….ညဘတျဘျောလီမဝတျတတျတဲ့အမ နို့လေးက ဘယျညာရမျးနတော လှမျးကိုငျလိုကျခငျြတယျ… အိပျခငျြယောငျဆောငျနပေမေဲ့တခါခါအမလုပျနတောကိုအားမရတော့ဘူး. ဟိုဘတျရှာက videoရုံမှာ တပတျတခါပွတဲ့အောကားထဲကိုကို အမကို ပကျလကျလှနျပွီး ဒူထောကျဆောငျ့ခငျြလာတယျ…အရဲစှနျ့ပွီး အမ ခါးနဲ့ဖငျကွီးကို ကိုငျဆောငျ့လိုကျတော့ အမ လီးကိုခြှတျပွီး ကနြေျာ့အပျေါ မှောကျအိပျကာ.. ဟဲ့ ဘယျသူ့မှမပွောနဲ့နျော. မနကျဖနျ ပုဆိုးနဲ့အကြီဝယျပေးမယျ …ဘုရားပှဲသှားရငျလဲမုနျ့ဖိုး၅၀၀၀ပေးမယျဆို…ဟုတျ ပွောပါဘူး…ဒါဆို နငျငါလုပျနတော သိလား….သိတယျ… အဲ့ဟို မသိဘူး…ဘာသိတယျမသိဘူးလဲ…နငျလုပျဖူးပွီလား…ဟငျအငျး videoထဲမွငျဖူးတာ….အဲ့လိုလုပျခငျြလား….အှနျ…ဘယျကစလုပျလဲ ..videoထဲ ..ဟို နို့စို့တာပဲတှတေ့ယျ….စိျု့ခငျြလား ငါ့နို့ရော အှနျ….ရော စို့ ဒါဆို…မကိုကျနဲ့နျော….အမ အကြီကို အပျေါလှနျခြှတျပွီး အမနို့ကို မွငျဖူးထားသလိုစို့လိုကျ နယျလိုကျနဲ့ အမ အဖုတျကွီးကိုမသိမသာ ခိုးပှတျလိုကျမိတယျ…အာလာလာ..အမအဖုတျမှာ အရညျတှပွေဈခြှဲနတောပဲ….ကနြျောနမျးကွညျ့လိုကျတော့ ကနြျောခိုးယကျနကြေ အနံ့. အမက ခေါငျးကို ပှတျနတော….
ကနြျော အမ အဖုတျကို မကျြနှာအပျကို ယကျတော့တာပဲ…အမ ဖုတျကို ဖွဲကွညျ့လိုပျတော့ လိပျပွာလိုတဖကျတခုဆီ အတောငျပံလိုလေးနဲ့ အပျေါမှာ အစလေ့ေး လြာနဲ့အပျေါအောကျယကျတော့ အငျးဟငျးဆိုပွီး အမ ဖိပှတျနတေယျ….ကနြျောလီးက တငျးရငျးပေါကျထှကျတော့မယျ…. အမ ထညျ့ခငျြတယျဆိုတော့ ကနြျောလီးကိုကိုငျက တညျ့ပေးပွီး ခါးကနေ ကိူငျပွီးရှနေ့ောကျမှနျမှနျလေးဆောငျ့ပေးနတော..ကနြောအမနို့ကွီးတှကေိုငျရငျး အရှိနျတငျကာ ဆောငျ့ခငျြနပွေီ…အမကလဲလိုခငျြနပွေီထငျတယျ. ကနြျောခါးကိုခပျသှပျသှပျဆှဲဆောငျ့နပွေီ….
ကနြျောမရတော့ဘူး လီးတခြောငျးလုံးကဉျြလာပွီ. ပွီးလဲပွီးခငျြနပေမေဲ့ ပွီးလို့မရ….အမက တဟငျးဟငျးတခြီပွီးတခြီပွီးနတောမွငျတော့ ကနြျော မောလာပွီ…အမ အဖုတျထဲကနေ လီးကိုဆှဲထုတျပွီး အမ ဗိုကျပျေါကို လကျနဲ့ထုလိုကျမှပဲ လရညျတှပေနျးထှကျကုနျတာ…နို့တှပေါပကေုနျတယျ…အမကို အမကိုလုပျနရေငျ လူကရောစိတျကပါပွီးခငျြနပေမေဲ့ မပွီးကွောငျးပွောပွတော့….မသိသေးလို့နမေယျဆိုပွီး ရအေိုးစဉျကိုသှားကာ ဆေးကွောနတောပဲ… ကနြျောလဲသေးဆငျးပေါကျပွနျတကျလာတော့ ငါကအခွောကျကွီးထငျတယျ…လကျနဲ့မှပွီးတတျတယျဆိုပွီး အတှေးလှနျနတောည၂နာရီလောကျမှ အမဘတျလှညျ့ကွညျ့တော့ အမဟိုဘတျလှညျ့အိပျနတောမွငျရတယျ….တငျကွီးက ဂီတာအိုးကွီးလိုလုံးကားနတေော့ ကနြျော အခှငျ့ရေးရတုနျး အမနောကျကနေ ဖငျကွီးကို ပှတျနမေိတယျ..
အမသိတယျထငျတယျ.ဖငျကွီးကော့ပေးတယျ…ဖငျမွောငျးကွီးထဲကနြျောလီးကွီးနဲ့ပှတျနရေငျး မနနေိုငျတော့ပဲ အမထဘီကိုဆှဲခြှတျလိုကျတာ….ဒူးကှေးအိပျနတေဲ့အမ ဖငျကွီးကွားမှ ဆောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးကွီးမွငျတော့ ကနြျောထိုငျပွီး တကေ့ ဖိသှငျ့လိုကျတယျ…ပွှတျ ဘှတျ…အား ဖွေးဖွေးထညျ့ဟဲ့ မတညျ့ဘူး ဖယျဆိုပွီးကနြေျာ့လီးကိုသူ့ဘာသာထညျ့ပေးမှာ ခြောမောစှာဝငျသှားတယျ…ကနြျောပွီးအောငျလိုးမယျလို့ကွံရှယျပွီး အမဖငျကွီးကို ကိုငျကာ အခကျြတရာလောကျမနားတမျးဆောငျ့တော့တာပဲ. ဖှတျဘှတျ ပလပျလပျဘှတျ အား ဟူး ကနြျောလကျနဲ့ထုနသေလိုခံစားလာရပွီ… ကနြျောလီးကိုလဲ ညဈထားသလို တငျးကွပျလာတာခံစားရတယျ….အရမျးကောငျးနပွေီ …..ဟိုး အား ကောငျးနပွေီ….မရတော့ဘူးကနြျောဆယျခကျြလောကျပဲဆကျဆောငျ့နိုငျတော့တယျ… ကနြျောလရညျတှအေမစဖုတျထဲပွီးလိုကျပွီး အမ ကိုဖကျအိပျပြျောသှားတော့တာပဲ…မနကျရောကျတော့ အမတောငျ တောငိယာထဲသှားပွီး ခလေးလဲသှားဆော့ ကနြျော ခှနျအားအပွညျ့နဲ့ပွနျနိုးလာနိုငျတော့တာ့…
လူပြိုရညျပကျြတဲ့ညပေါ့ဗြာ..သူ့သားပွနျလာတော့ကနြောကျမလုပျရတော့ဘူး….နောကျတလလောကျနတေော့သူ့ယောကျြားပွနျလာ… ကနြျောအမကိုလုပျရဖိူ့ပိူဝေးသှားတာပေါ့….အရငျလိုပဲရခြေိုးခါနီးဘျောလီခြှတျတဲ့အခါ နို့ခိုးကွညျ့ သေးပေါကျတဲ့အခါဖငျခိုးကွညျ့နဲ့….အမဗိုကျကွီးလာတော့ ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျလဲပွောငျး ကနြျောမကျြလုံးထဲမှနျးထူလို့မရတော့တာနဲ့… နောကျတယောကျကိုရှာပွီးမှနျးထုရတော့တာပေါ့ဗြာ….. ခလေးမးမှေးပွီးအမနို့ကွီးက ၂ဆလောကျကွီးလာတယျ …ဘျောလီတောငျမဆံ့ဘူးဆိုပွီးမဝတျလိုဘူ…အမက ခေါငျးနစှေတျဝတျရတဲ့ ဆှဲသားအကြီးကို ဝတျတတျတယျ…ခလေးလဲတနှဈကြျောပွီဆိုတော့ အမ ဖကျကောကျသှားနပွေီ…. အမ တို့ဖကျထုံးတှကေကနြျောတို့တောငျယာတဲမှာထားတာ….ဖွဈခငျြတော့ရှာမှ အလှူတခုရှိတာနဲ့ဖကျကောကျသမတှနေားကွတယျ… တဲ့မှာလဲကနြျောတယောကျတညျး တဲစောငျ့ အကိုတို့ကမနကျမှပွနျလာကွမှာ…အမက ဖကျအရေးကွီးလို့တဲ့ တယောကျတညျးလာကောကျတာ…နမှေနျးတညျ့တော့ အမတဲဘေးဖကျထုံးကိုခကြာ ရဝေငျသောကျယကျခပျနားနရေငျး မောလိုကျတာငမငျးရာ တယောကျတညျး ဘယျသူမှလဲအဖျောမရှိဘူးဒီနေ့ ရှာအလှူဆိုတော့ နငျ့အကိုကလဲထမငျးကြှေးတဲ့…
ခလေးတော့နို့ဆာနပွေီထငျတယျ…နို့တှလေဲတငိးနပွေီ…ဟုတျတာပေါ့ အမ အကြီအောကျမှာ ခလေးခေါငျးလုံးလောကျရှိတဲ့နိုးကွီးနှဈလုံးအယျထပွီးတောငျ့နတော..နို့သီးခေါငျးလေးတောငျထောငျနတေယျ…စောစောကသတိမထားမိ ကနြျောက တဲဘေးလြိုထဲကစမျးခြောငျးထဲရခြေိုးမလို့ အပျေါအကြီခြှတျထားပွီး ဘော့လုံးကနျဘောငျးဘီအဖွူနဲ့ အတှငျးခံကမပါတော့ အမနို့ကွီးမွငျပွီး မို့မှောကျထလာပွီ… မရတော့ဘူး ရမွေောငျးထဲကိုထသှားတော့မှ အမ ဗိုကျဆာရငျထမငျးစားလေ ကနြျောရသှေားခြိုးဦးမယျ…အေးစားမယျ ခဏနားခွလေကျဆေးပွီး… ကနြျော ရတေယောကျကကနြတေဲ့ရအေေးအေးအေး ရစေိမျရငျးလီးကွီးကိုဆှနမေိ….ရကေ တောငျကစြမျးရဆေိုတော့ မွောငျးအနကျနိမျ့တဲ့ဘတျစီးနတော..ကနြျောကမွောငျးထဲမှာဆိုတော့ဘေးကသှားတောငိမမွငျရ… ရတေခှနျလိုဆိုတော့ ရကေလဲတဝေါဝေါ. အမ ခွလေကျလာဆေးနတောမသိလိုကျဘူး…ခဏနေ အသံကွားလို့ အောကျဘတျရှကွေ့ညျ့မှာ အမ အကြီကိုမတငျပွီး တငျးနတေဲ့နို့တှကေိုညဈထုတျနတော….ပနျးထှကျနတေဲ့နို့ရညျတှမြေား ရပေနျးလေးကနြတောပဲ..ကနြျောက ဘာလို့ညဈထုတျနတောလဲအမရ…ခလေးစို့မှာပေါ့….ခလေးနို့တိုကျခြိနျကြျောနပွေီလေ…နို့ကခလေးမစို့တော့တငျးနတော …ဒီနို့ခလေးစို့ရငျ ခြီးပနျးတတျတယျလေ…နငျကလဲ…နမွောစရာကွီးနျော….နို့က အရသာနှားနို့နဲ့တူလားအမ…
သိဘူးလဟေယျ..ငယျငယျကဆိုတော့အရသာမမှတျမိဘူးလေ.. လာခံထားကွညျ့ပါးစပျ. ညဈပေးမယျ. ကနြျော ရစေိမျရငျးအမရစေပျကနေ ကုနျးညဈနတေဲ့နို့ရကေိုပါးစပျဟ ခံလိုကျတယျ.ပါးစပျထဲသိပျမရောကျ…မကျြနှာတှပှေကုနျတယျနို့ရတှေနေဲ့ အမကလဲ ဗိုကျထဲမှမဝငျတာ…သိဘူး…စုပျကွညျ့မယျဆိုပွီး နို့ကွီးကို ပငျ့ကခလေးနို့စို့သလိုစို့လိုကျတယျ…..ညှီတယျ.အရသာကွီးက ဟဲ့တျောတော့ သူမြားတှမွေငျကုနျမယျ.ဒီနဘေ့ယျသူမှလာပါဘူးအမရယျ..အမ ရခြေိုးလိုကျလေ …ဟဲ့ မသာ ဂပြနျခြိုး ခြိုးရမှာလား …ငါ့အဝတျပိုမပါတာကို.ခြိုးပေါ့ ရော့ပုဆိုး ဝတျခြိုးခငျြရငျ ပတျဝနျးကငျြမှာတောငျယာတဲလဲမရှိသလို ကိုယျ့တဲတဈတဲပဲရှိတော့ ကိုယျ့ခွံကိုယျ့ဝနျးလိုဖွဈနပွေီ.. အမကလဲ အရငျတခါ မွငျဖူးထားတာကို ဒီတိုငျးခြိုးလိုကျပေါ့ လနျးသှားတာပေါ့…အေး ဟယျ ပူလဲပူတယျ …ခြိုးမယျ …အဝတျအစားတှခြှေတျပွီးရထေဲဆငိးလာတာ ….ဘာမှဝတျမထားပဲ ဖငျကွီးရငျကွီး ကနြေျာ့ထကျ၂ဆလောကျပိုကိတျနတေဲ့အမ ရမွေောငျးထဲဗွှမျးဆိုခုနျဆငျးပွီး ရငေုတျနတောပေါ့….အမရငေုတျပွီး ဗွှနျးဆို ပျေါလာခြိနျမှာတော့ အမရဲ့တငျးကားနတေဲ့နို့ကွီးရယျ ဆီခုံကအမှေးမဲနကျနကျအောကျက စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးကွီးကိုစိုကျကွညျ့ရငျ
မနတေော့ပဲ….အမကိုသိုငျးဖကျက အမနို့ကွီးတှကေို ကုနျးစို့တော့တာပဲ…ဟဲ့ အို ဟဲ့သူမြားတှမွေငျကုနျမယျလေ….မရတော့ဘူးအမရာ မွငျလဲမတကျနိုငျဘူး ကနြေျာ့လီးက ပေါကျထှကျတော့မယျ…. အမ ကနြေျာ့လီးကိုငုံ့ကွညျ့ပွီး ဘောငျးဘီ အဖွူအောကျ အမွောငျးကွီးထကာ ဖောငျးကားနီးသောကနြျောလီးကွီးကိုကွညျ့ပွီး ဒါဆိုလဲမွနျမွနျလုပျဟယျ ငါကွောကျတယျ… သူမြားတှသေိကုနျမှာ…. ခုနက ညှီတယျဆိုတဲ့နို့ရညျတှကေို ပါးစပျပွညျ့အောငျ စို့လိုကျမြိုခလြိုကျ အမ စောကျစိလေးကိုပှတျလိုကျနဲ့ ကနြျော မထိနျးနိုငျတော့ဘူး…. အမကို ကမျးပါး ကြောကျနံရံပျေါ မှီခိုငျးပွီး ကနြျောနောကျကနေ အားကုနျဆောငျ့တော့တာပဲ အမ လဲ ဟငျး နာနာဆောငျ့ပါငါ့မောငျရယျ အမ ခံနိူငျတယျ…နငျ့အကိုက ခုဆိုမူးပွီးအိပျတာမြားတယျ….ငါ့ကိုမလိုးတော့ဘူး…အား ကောငျးလိုကျတာဟယျ ….အသဆေောငျ့အားမနာနဲ့ ….ငါ့နို့တှပေနျးထှကျနပွေီ… အား ကောငျးတယျ…အား ဆောငျ့ဆောငျ့ အား …ရထေဲစိမျလိုကျ လိုးလိုကျနဲ့ တွှဗှနျးဗွှနျးပဲ….ငမငျး ဆောငျ့ပေး
ငါ ကောငျးနပွေီး အားအားအား အမပွီးသှားပွီး တှနျ့ပွီး တဆကျဆကျဖွဈသှားကတညျးက ကနြျောလဲ အမကို ဆောငျ့ရငျး အမပွီးလို့ထှကျတဲ့အရညျတှနေဲ့လရကေလဲခွသေလုံးထိဆိုတော့ အမအဖုတျကအရငျလိူမကွပျတော့ဘူး ….ဒါကွောငျ့အမကိုဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျခိုငျးပွီးကနြျောလီးကိုစုပျခိုငျးလိုကျတယျ…ကနြျော အားမရတော့လို့. လကျနဲ့ထုရငျး အား အမ စုပျထား အား ပွီးပွီ ဟူး အားဗွဈဗွဈ ပွှတျ….အမ မကျြနှာနဲ့နို့တှပေျေါ အောငျးရညျတှပေနျးထညျ့လိုကျပါတော့တယျ…..ဒီလိုနဲ့ထမငျးစားရငျး အမ ခုခလေးမှေးတာ စဖုတျကွီးအရမျးကယျြသှားတယျနျော… ဘယျကလာ ငမငျးရယျ…နငျ့အကိုက ဆေးထိုးပွီး သူ့လီးမှာဘောတှထေညျ့လာတာ ၄လုံးတောငျဟဲ့….ငါလဲအစပိုငျးနာပမေဲ့နောကအပိုငျးခံလို့ကောငျးခံခငျြခါမှ နငျ့အကိုက မလိုးပေးတော့လို့ ယားနတော နငျလုပျပေးတာတောငျ ငါတျောတျောခံခငျြနလေို့ အားမရဘူး…..နငျ့လီးက သေးသှားပွီးတဲ့….ဒါကွောငျ့ဆေးထိူးထားတဲ့လီးနဲ့ခံဖူးတဲ့သူတှကေလငျငယျမနဘေူးတဲ့….နရေငျလဲလငျထကျကွီးတဲ့လီးနဲ့မှဆိုတာ သိလိုကျပတေော့…….
ကွိုးစားပါဦးမယျ… ကိုကွီး စိတျကူးပုံဖျောသညျ
ကျနော် နာမည်က ကျော်မင်း …အသက်က ၁၆နှစ်…တောသားတယောက်မို့ လူကောင်ထွားတယ်…ကျောင်းက ခုမှ ၈တန်းတက်နေတုန်း…ကျောင်းပိတ်ရက် တောင်ယာ လယ်လုပ်ငန်းမှာလုပ်ကိုင်ကူရင်း စီနီယာနွားကျောင်းသားများရဲ့အတင်းဝိုင်းဝန်ထုပေးမှုကြောင့် ဂွင်းကောင်းကောင်းတိုက်တတ်နေပြီ… ပြီးတဲ့အရသာကိုသိပ်မသိသေး လရည်ထွက်ရင် ကျင်တယ်ဆိုတာပဲသိထားတော့ ဂွင်းလဲမထုလိုဘူး…. ဂွင်းမထုပဲလရည်ထွက်ရတဲ့အရသာက အိပ်မက်ထဲမှာ… ကျနော်တို့အိမ်ဘေးက အမက အသက်၃၀လောက်ရှိပြီး ခလေးနှစ်ယောက်အမေ ခလေးမွေးပြီး ၅နှစ်လောက်ကြာပြီဆိုတော့ ရင်ကားတင်ကားနဲ့ ဖွံ့ထွားလှတယ်…ကျနော်လို့လူပျိုပေါက် တယောက်အတွက်တော့ မှန်းထုစရာ မမကြီးပေါ့ဗျာ….မိသားစုချင်းကလဲရင်းနှီး တရွာတည်းသား အမျိုးတောင်ကင်းမကင်းမသိဘူး….အဲ့အချိန်က Videoရုံမှာ တယောက်တရာ နှစ်ရာပေးကြည့်ရတဲ့ခေတ်….ကိုယ်ကလူငယ်ဆိုတော့ကျောင်းပိတ်ရက် videoရုံကိုအစောကြီးသွားနေရာယူ ကာထိူင်ပြီး ကာလာအိုကေ သီချင်းတွေကြည့်နေရင်း ဘေးနာ အမကြီးရောက်လာက ထိုင်ကြည့်နေတာပေါ့…တစတစလူများလာတော့ ကိုယ်ကလက်ကိုနရံဘေးကပ် ပက်လက်မဟုတ်ကျောမှီမဟုတ်ပုံစံကြည့်နေတုန်း…အမကသူ့တင်ပါးကြီးနဲ့ထိမိဖိမိလုနီးပါ နံရံကိုမှီကြည့်နေတာနဲ့ကြုံတော့ ဖိုမသဘာဝ ကျနော်သွေးတွေဆူလာတယ်…
အမဖင်ကြီးက အိစက်ပြီး ထိနေတာတောင်ခွာမိသွားမှာကြောက်တဲ့အထိ အရသာခံနေရင်း ဇာတ်ကားကိုအာရုံမရောက်တော့ဘူး….တပိုင်းပြီးတော့ကျနော်အိမ်ပြန်ပြေးလာမိတယ်…အိမ်သာထဲထုမလို့ ကျနော်အိပ်တာက အိမ်ရှေ့ရေတွင်းကိုမိုးထားတဲ့ ဖက်မိုစထရံကာ အခန်းထဲမှာ ကျနော်ခြေရင်းမှာရေတွင်း အမကကျနော်တို့ရေတွင်းမှာနေ့တိုင်းရေချိုးပြီး သူ့ထဘီနဲ့အတွင်းခံပင်တီတွေကို သူ့ခြံထဲကရေတွင်းနဲ့ကပ်လျက် ခြံစည်းရိုးဘေးလှန်းနေကြ…အခါတိုင်းသတိမထားမိပေမဲ့ ကျနော်ခုနက feelကြောင့်ထွက်နေတဲ့အရည်တွေကိုရေဆေးရင် မီးရောင်အောက်မှာ အမ ပင်တင်ကြီးဖွေးခနဲတွေ့လိုက်ရတယ်….ကျနော်သွေးတွေဆူပွတ်လာပြီး ပတ်ဝန်ကျင်ကိုအကဲခပ်လိုက်တော့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်….ကျနောက်ခြံစည်းရိုးပေါက်ကနေ လက်နှိုက်ပြီးအမပင်တီကို ယူက ကျနော်အခန်းထဲ ပြေးဝင်ခဲ့မယ်တယ်….အခန်းထဲရောက်တော့ ပင်တင်ကို ဖြန့်ချလိုက်ပြီ အမစောက်ဖူတ်နေရာနားကို နန်းကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာ. ကျနော်လီးဟာတဆက်ဆက်တုန်နေပြီ…တနေကုန်ဝတ်ထားပြီး မလျော်ပဲချွတ်တင်ထားတာထင်တယ်…စောက်ဖုတ်နဲ့သင်းသင်းလေးက ကျနော့်ဘဝပထမဆုံးအရသာကိုခံစားဖူးတဲ့အနံ့ …လျာနဲ့ယက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ အဖြူ အဖတ်လေးတွေယေးယေးမြင်ရပြီး ဘာအရသာရယ်မပြောတတ်ပေမဲ့ ကျနော်သွေးတွေဆူပွတ်လာပြီ…စောက်ဖုတ်နေရာတခုလုံးကို ကျနော်လျာနဲ့ယက်ရင်း ပါးစပ်ကလဲအမကိုမြင်ယောင်ကာ ထုနေလိုက်တယ်….အရမ်းကောင်းပြီးပြီးခါနီးမှာတော့ အမရဲ့ပင်တင်အဖုတ်နေရာ ကိုကျနော်လရည်တွေ အများကြီးပန်းထည့်လိုက်တာပေါ့….ခဏဇိမ်ယူပြီး အမပင်တီကိုသူ့နေရာသွားပြန်ထားကာ အိပ်ပျော်သွားတော့တာပဲ….
နောက်နေ့ကျ သူ့သားအကြီးကောင်က ကိုကြီး အမေက ညကျရင်အိမ်မှာအဖော်လာအိပ်ပေးဦးတဲ့….တကယ်တော့ အဲ့အချိန်ကတအိမ်နဲ့တအိမ်ကမဆက်သေး….ယောကျာ်းတွေတော်တော်များများကတောတက်သစ်ခုတ်ကြတာ တခေါက်ကို၅ရက်တပတ်ကြာတတ်တယ်…လက်နက်ကိုင်တွေသူပုန်တွေမသိအောင် ညဘတ်၁၁နာရီနောက်ပိုင်းမှရွာကထွက်တတ်ကြတယ်…အမက သူရဲကြောက်တတ်တော့ သူ့ယောကျာ်း မသွားခင် ကိုကအဖော်ကြိုသွားထားပေးရတာ…ထုံးစံအတိုင်းပဲvideoကြည့်ပြီးပြန်လာတော့ ၉နာရီလောက်ရှိပြီ…ကျနော်နဲ့သူ့သား အကြီးကောင်က ခြင်ထောင်တလုံးနဲ့အမတို့ခေါင်းရင်းမှာ…အမနဲ့သူ့သမီးလေးရယ် သူ့ယောကျာ်း ရယ်က ခြေရင်းကပ်လျက်ခြင်ထောင်တလုံး…..
အိပ်ခါနီးမီးခွက်မှုတ်ငြိမ်သွားကြချိန်ကိုယ်ကမအိပ်နိုင်သေးပဲ အမကို မြင်ယောင်ကာ ကျနော်လီးကိုဆွနေမိတယ်….လူပျိုပေါက်ဆိုတော့ လဥက ဂျွတ်ဆိုတဲ့အရာကလဲလွတ်ခွာလို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာ ဆယ်နာရီခွဲလောက်နေတော့ အဟန့်အဟန့် …အမချောင်ခြောက်တချက်ဆိုးပြီး…သားကြီးရေ…သားရေဟု.ခေါ်ပြီး ကျနော်နာမည်ကိုပါခေါ်တယ်..ကျနော်ကို့က ငမင်းဟုသာ ခေါ်ကြတာ. အိမ်နားကလူတွေက …မထူးပဲနေတော့ မခေါ်တော့ပဲ ခဏနေတော့ အမတို့ခြင်ထောင်ထဲက တဖက်ဖက် အစွပ်စွပ်အသံတွေထွက်လားတော့တာပဲ…ဟဲ ဖြေးဖြေး… အားနာတယ်…ချောင်းဟံသံအဆုံးမှာတော့ အိမ်လှုပ်ချက်နည်းနည်းပိုယိုင်းကာ ငြိမ်ကြသွားပါတော့တယ်….ခဏနေတော့အမ အပေါ့ထသွားတာ မြင်လိုက်တယ်…အမက ကြောက်တတ်တယ်.အပေါ့သွားရင် ညဘတ် အိမ်ခန်းထဲမှာပဲပေါက်တာ…အမအပေါ့သွားပြီးဆယ်မိနစ်လောက်ကြာတော့ သူ့ယောကျာ်းထလာကာ နွားကောက်ပြီးတောတက်သွားတော့တာပေါ့….ကျနော်အဲ့ကတည်းက အမြဲလိုလိုအမကိုပဲမှန်းထုဖြစ်တယ်. နောက်ဆယ်ရက်လောက်နေတော့ အမယောကျာ်း အလုပ်ထွက်မယ်ဆိုပြီးဖားကန့်ဘတ် တက်သွားတယ်.အဲ့ကတည်းက ညတိုင်းအိပ်ပေးဖော်ဖြစ်သွားပြီး ညဆို ဘယ်သူမှမရှိရင် ကို့အိပ်ယာကိုဝင်အိပ်နေတာပဲ…အမရေချိုးရင်ခိုးကြည့်လိုက် သေးပေါက်ရင် လိုက်ခြောင်းလိုက်နဲ့ ကျနော် ၁၇နှစ်ပြည့်တော့မယ် လူပျိုရည်မပျက်သေး….
တနေ့အမက အိမ်သာသွားချင်လို့အဖော်ခေါ်တာ ကျနော်လဲ ဗိုက်နာနေတာနဲ့ အဖော်လိုက်ပေးရင်း အမက တံခါးမပိတ်ဘူး …မီးမှိတ်ထားပေမဲ့အမပေါင်လုံးကြီးတွေ ဆီးခုံကြီးတွေက လရောင်အောင် ရေးရေးလေးမြင်ရင် ကျနော်လီးတောင်လာတယ် အမတို့အိမ်သာက နွားတင်ကုတ်ဘေးဆိုတော့ ကျနော်ဘဲ ရေကာတုန်းပေါ် ဘောင်ဘီချွတ်ရင် လီးကိုကစားနေမိတယ်….ကံကောင်းချင်တော့ အဲ့ခေတ်က အင်္ဂလိပ် ဆေးထဲ့တဲ့ ဘူးအဖြူးလေတွေ့တယ်..ဖွင့်ကြည့်တော့ဘာမှမရှိ ပြောင်စင်လို့. ကျနော်ကျနော်လီးမနိုးတနိုးလေးကိုထည့်ကြည့်လိုက်တော့ အတော်ပဲဗျာ အပေါက်နဲ့ကျနော်လီးက လီးလဲတောင်လာရော ထုတ်မရတော့ပဲ လေခိုသလိုဖြစ်ပြီး တဘတ်ဘွတ်မြည်နေတော့တာ… သေးလိုလိုအရည်တွေလဲကျနော့်လီးကထွက်နေတော့ စောက်ဖုတ်ကိုလီးနဲ့လိုးနေသလို ဖွတ်ဘွတ်ဗြဲဗြစ်နဲ့အသံကိုစုံနေတာပဲဗျာ ..အမှောင်ရိတ်ကနေ အမ ကိုစမ်းတဝါးဝါးငေးကြည့်ရင်း ကျနော် အချက်ပေါက်း၃၀လောက်အသံစုံနဲ့ထုပြီးချိန်မှာတော့ ကျနော်လရည်တွေဘူးထဲပန်းထုတ်လိုက်တယ်…အမ ကအိမ်သာတက်ပြီးလို့ကျနော့်ကိုခပ်လှမ်းလှမ်းမှာစောင့်နေပြီ..ကျနော်လဲရှက်ရှက်နဲ့မျက်နှာကြီးရဲကာ အမနောက်ကလိုက်ပြန်သွားပေမဲ့အမက မသိသလိုပဲ….မနက်အိပ်ယာနိုးတော့ အမက နွားတွေဆွဲထုတ်နေပြီ ကျနော်အပေါ့သွားရင် ပြန်အလာ ဟိုကောင်လေး ညကဒီနားမှာဘာထိုင်လုပ်နေတာလဲ အီးပါထားတာလဲမတွေ့ဘူး ဒီဘူးထဲက နှပ်ချေးရည်တွေပဲတွေ့တယ်တဲ့… ကျနော်က မသိဘူးလေဆိုတော့…နင်လူပျိုဖြစ်နေပြီထင်တယ်….
ကောင်မလေးတွေလိုက်ပြောလေတဲ့….ဒီလိုနဲ့ဆယ်ရက်လောက်အထိ ရှက်ရှက်နဲ့နေပေမဲ့ အမ ချွတ်ထားလျော်ထားတဲ့ပင်တီတွေခိုးနမ်းပြီးထုမိနေတုန်းပဲ…တနေ့တော့ ခေါင်းနပန်းကြီးသွားရတယ်..ကျနော်နဲ့အိပ်တဲ့အမသားကြီးသူ့အဖွားအိမ်သွားအိပ်တော့ ကျနော်အမပင်တီကြီးအိပ်ယာထဲထိ ယူလာတာ… အမပင်တီကိုကျနော်ဝတ်ထားပြီး အမအဖုတ်နေရာကိုလီးနဲ့တေ့ပြီးထုလိုက်တာ လရည်တွေအများကြီးပဲ.အမက videoကြည့်နေတော့လွတ်လပ်တာပေါ့ထုပြီးထဘီတန်းကိုသွားလှန်းပြီးပြန်အလာ videoပြီးလို့ပြန်လာတဲ့လူတွေနဲ့ကပ်သီလေ…ဟူး ကံကောင်းလို့…. ကျနော်အိပ်ယာထဲအိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတုန်း မိုးချိန်းသံကြားလိုက်တယ်….အမအဝတ်တွေရုတ်ပြီးပြန်အတက်လာ …ခုန ထုထားတယ်ဘောင်းဘီပါပါလာတာပေါ့ဗျ….မီးရောင်အောင်အဝတ်ထိုင်ခေါက်ရင်း သူ့ဘောင်းဘီက လရည်တွေကိုတွေ့ပြီး ဟယ် ဘာတွေလဲမသိဘူး ငါညနေကမှလျော်ထားတာပါ….ငမင်း ဘယ်သူတွေလာသေးလဲမလာဘူးလေအမ ဘာလို့လဲ….ကျနော်လရည်တွေကို လက်နဲ့တို့ပြီးနန်းကြည့်တာခြင်ထောင်ထဲကနေမြင်နေရတယ်…
ခဏငြိမ်သွားပြီး….မိုးသည်းမဲစွာရွာပါလေရော…ငမင်း နင့်ညီပြန်မလာလောက်တော့ဘူး..နင်တို့အိပ်ယာလဲမိုးယိုနေတယ်လေ….လာဒီခြင်ထောင်ထဲလာအိပ်….ခြင်ထောင်ကြီးဖြုတ်ထားဦးတဲ့… အမက တောင်းရမ်းယူထားတာ…ခန်းဝင်ခြင်ထောင်ကမ မဝင်ရပဲ အလည်က ခွဲပြီးဝင်ရတဲ့ပုံစံလေး ကျယ်လဲကျယ်တယ်…. ကျနော်က ခြင်ထောင်နားကပ်အိပ်တော့ အမနဲ့ကျနော်ကြား ဘာမှမခံထားပေမဲ့ တထောင့်ထွာလောက်ကွာနေတာပေါ့….အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းနဲ့ကျိတ်မှတ်အိပ်ခြင်ရောင်ဆောင်နေပေမဲ့ မအိပ်ပျော်ဘူး….အမဖင်ကြီးကိုပဲမြင်ယောင်နေတယ်….အမကတညကိုနှစ်ခါလောက်သေးထပေါက်တတ်တာသိတော့ ကျနော်အရဲစွန့်ပြီး ပုဆိုးဂွင်းလုံးချွတ်ပြီး မျက်လုံးမှိတ်အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာ…မကြာဘူး ၁၅မိနစ်လောက်နေတော့ အမ မီးခြစ်ခြစ်သံကြားတယ်…ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး ကျနော်ဘတ်တချက်လှည့်ကြည့်ပြီးအိမ်ခန်းထဲတဗြောဗြော တရှစ်ရှစ် သေးပေါက်ပြီး ခြင်ထောင်ထဲပြန်ဝင်လာတော့ သူ့သမီးကိုစောင်သေချာခြုံ ကာ ကျနော်ဘတ်လှည့်ထိုင်နေတာပဲ…
ဖယောင်းတိုင်ကိုအပြင်မှာထွန်းခဲ့တော့ ခြင်ထောင်ထဲ အလင်းရောင်က မှိန်ပေမဲ့ရှင်းတယ်….ကျနော်ကနဖူးပေါ်လက်တင်အိပ်နေကျဆိုတာသိတော့ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်တာအမမသိဘူး… ကျနော်ထောင်မတ်နေတဲ့လီးကိုကြီး ပုဆိုး အုပ်ပေးသလိုနဲ့မသိမသာပွတ်ဆွဲသွားတယ်…ကျနော်ရင်တွေတအားခုန်နေပြီ. အမ ငါ့ဟာကြီးမြင်သွားပြီဆိုတဲ့အသိနဲ့တင်…ပွတ်ဆွဲသွားတုန်း ကျနော်လီးထိပ်က အရည်ကြည်လေး အမလက်ကိုစိုသွားတယ်ထင်တယ်… လက်က အရည်စက်လေးကိုနန်းကြည့်နေတာ ပြီးတော့လျာလေးထုတ်ပြီး ယက်ကြည့်ရင်း အမ မျက်လူံးတွေ အရောင်လဲ့နေတာ ခုမှမြင်ဖူးတာ…ခဏနေတော့ကျနော့ကို အိပ်မအိပ်သေချာအောင် လှုပ်ကြည့်တာပဲ…ကျနော်လဲလုံးမမလှုပ်မှ အမ ပုဆိုးကိုပြန်ဖယ်ပြီး ကျနော်လီးကိုငုံပြီးစုပ်တော့တာပဲ… မိုးလဲဆဲစမို့ အသံက တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ ကျနော် တခါမှမခံစားဖူးတော့ ကြိမ်းလာပြီ… နာလဲနာတယ်တခါခါ …အမက ခဏနေတော့ ထဘီခါးမှာပတ်ပြီး ကျနော့ကိုကျောပေးပြီးအပေါ်ကနေ တက်ခွတော့တာ့ပဲ… ခလေးနှစ်ယောက်မွေးထားတဲ့အမ အဖုတ်က မကြပ်တော့ပေမဲ့ မချောင်နေဘူး …
ကျနော်လီးကလဲ အရမ်းကြီးမကြီးပေမဲ့ ကျားခေါင်းဓာတ်မီးထက်တော့ကြီးတယ်…ရှည်လဲရှည်တော့… မသိသာဘူး..အမ ခေါင်းကို မော့ပြီးအသံမမြည်အောင် ပွတ်ကာ ရှေ့နောက်ဆောင့်နေတာ….ညဘတ်ဘော်လီမဝတ်တတ်တဲ့အမ နို့လေးက ဘယ်ညာရမ်းနေတာ လှမ်းကိုင်လိုက်ချင်တယ်… အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေပေမဲ့တခါခါအမလုပ်နေတာကိုအားမရတော့ဘူး. ဟိုဘတ်ရွာက videoရုံမှာ တပတ်တခါပြတဲ့အောကားထဲကိုကို အမကို ပက်လက်လှန်ပြီး ဒူထောက်ဆောင့်ချင်လာတယ်…အရဲစွန့်ပြီး အမ ခါးနဲ့ဖင်ကြီးကို ကိုင်ဆောင့်လိုက်တော့ အမ လီးကိုချွတ်ပြီး ကျနော့်အပေါ် မှောက်အိပ်ကာ.. ဟဲ့ ဘယ်သူ့မှမပြောနဲ့နော်. မနက်ဖန် ပုဆိုးနဲ့အကျီဝယ်ပေးမယ် …ဘုရားပွဲသွားရင်လဲမုန့်ဖိုး၅၀၀၀ပေးမယ်ဆို…ဟုတ် ပြောပါဘူး…ဒါဆို နင်ငါလုပ်နေတာ သိလား….သိတယ်… အဲ့ဟို မသိဘူး…ဘာသိတယ်မသိဘူးလဲ…နင်လုပ်ဖူးပြီလား…ဟင်အင်း videoထဲမြင်ဖူးတာ….အဲ့လိုလုပ်ချင်လား….အွန်…ဘယ်ကစလုပ်လဲ ..videoထဲ ..ဟို နို့စို့တာပဲတွေ့တယ်….စို့်ချင်လား ငါ့နို့ရော အွန်….ရော စို့ ဒါဆို…မကိုက်နဲ့နော်….အမ အကျီကို အပေါ်လှန်ချွတ်ပြီး အမနို့ကို မြင်ဖူးထားသလိုစို့လိုက် နယ်လိုက်နဲ့ အမ အဖုတ်ကြီးကိုမသိမသာ ခိုးပွတ်လိုက်မိတယ်…အာလာလာ..အမအဖုတ်မှာ အရည်တွေပြစ်ချွဲနေတာပဲ….ကျနော်နမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကျနော်ခိုးယက်နေကျ အနံ့. အမက ခေါင်းကို ပွတ်နေတာ….
ကျနော် အမ အဖုတ်ကို မျက်နှာအပ်ကို ယက်တော့တာပဲ…အမ ဖုတ်ကို ဖြဲကြည့်လိုပ်တော့ လိပ်ပြာလိုတဖက်တခုဆီ အတောင်ပံလိုလေးနဲ့ အပေါ်မှာ အစေ့လေး လျာနဲ့အပေါ်အောက်ယက်တော့ အင်းဟင်းဆိုပြီး အမ ဖိပွတ်နေတယ်….ကျနော်လီးက တင်းရင်းပေါက်ထွက်တော့မယ်…. အမ ထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ ကျနော်လီးကိုကိုင်က တည့်ပေးပြီး ခါးကနေ ကိူင်ပြီးရှေ့နောက်မှန်မှန်လေးဆောင့်ပေးနေတာ..ကျနောအမနို့ကြီးတွေကိုင်ရင်း အရှိန်တင်ကာ ဆောင့်ချင်နေပြီ…အမကလဲလိုချင်နေပြီထင်တယ်. ကျနော်ခါးကိုခပ်သွပ်သွပ်ဆွဲဆောင့်နေပြီ….
ကျနော်မရတော့ဘူး လီးတချောင်းလုံးကျဉ်လာပြီ. ပြီးလဲပြီးချင်နေပေမဲ့ ပြီးလို့မရ….အမက တဟင်းဟင်းတချီပြီးတချီပြီးနေတာမြင်တော့ ကျနော် မောလာပြီ…အမ အဖုတ်ထဲကနေ လီးကိုဆွဲထုတ်ပြီး အမ ဗိုက်ပေါ်ကို လက်နဲ့ထုလိုက်မှပဲ လရည်တွေပန်းထွက်ကုန်တာ…နို့တွေပါပေကုန်တယ်…အမကို အမကိုလုပ်နေရင် လူကရောစိတ်ကပါပြီးချင်နေပေမဲ့ မပြီးကြောင်းပြောပြတော့….မသိသေးလို့နေမယ်ဆိုပြီး ရေအိုးစဉ်ကိုသွားကာ ဆေးကြောနေတာပဲ… ကျနော်လဲသေးဆင်းပေါက်ပြန်တက်လာတော့ ငါကအခြောက်ကြီးထင်တယ်…လက်နဲ့မှပြီးတတ်တယ်ဆိုပြီး အတွေးလွန်နေတာည၂နာရီလောက်မှ အမဘတ်လှည့်ကြည့်တော့ အမဟိုဘတ်လှည့်အိပ်နေတာမြင်ရတယ်….တင်ကြီးက ဂီတာအိုးကြီးလိုလုံးကားနေတော့ ကျနော် အခွင့်ရေးရတုန်း အမနောက်ကနေ ဖင်ကြီးကို ပွတ်နေမိတယ်..
အမသိတယ်ထင်တယ်.ဖင်ကြီးကော့ပေးတယ်…ဖင်မြောင်းကြီးထဲကျနော်လီးကြီးနဲ့ပွတ်နေရင်း မနေနိုင်တော့ပဲ အမထဘီကိုဆွဲချွတ်လိုက်တာ….ဒူးကွေးအိပ်နေတဲ့အမ ဖင်ကြီးကြားမှ ဆောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးမြင်တော့ ကျနော်ထိုင်ပြီး တေ့က ဖိသွင့်လိုက်တယ်…ပြွတ် ဘွတ်…အား ဖြေးဖြေးထည့်ဟဲ့ မတည့်ဘူး ဖယ်ဆိုပြီးကျနော့်လီးကိုသူ့ဘာသာထည့်ပေးမှာ ချောမောစွာဝင်သွားတယ်…ကျနော်ပြီးအောင်လိုးမယ်လို့ကြံရွယ်ပြီး အမဖင်ကြီးကို ကိုင်ကာ အချက်တရာလောက်မနားတမ်းဆောင့်တော့တာပဲ. ဖွတ်ဘွတ် ပလပ်လပ်ဘွတ် အား ဟူး ကျနော်လက်နဲ့ထုနေသလိုခံစားလာရပြီ… ကျနော်လီးကိုလဲ ညစ်ထားသလို တင်းကြပ်လာတာခံစားရတယ်….အရမ်းကောင်းနေပြီ …..ဟိုး အား ကောင်းနေပြီ….မရတော့ဘူးကျနော်ဆယ်ချက်လောက်ပဲဆက်ဆောင့်နိုင်တော့တယ်… ကျနော်လရည်တွေအမစဖုတ်ထဲပြီးလိုက်ပြီး အမ ကိုဖက်အိပ်ပျော်သွားတော့တာပဲ…မနက်ရောက်တော့ အမတောင် တောငိယာထဲသွားပြီး ခလေးလဲသွားဆော့ ကျနော် ခွန်အားအပြည့်နဲ့ပြန်နိုးလာနိုင်တော့တာ့…
လူပျိုရည်ပျက်တဲ့ညပေါ့ဗျာ..သူ့သားပြန်လာတော့ကျနောက်မလုပ်ရတော့ဘူး….နောက်တလလောက်နေတော့သူ့ယောကျာ်းပြန်လာ… ကျနော်အမကိုလုပ်ရဖိူ့ပိူဝေးသွားတာပေါ့….အရင်လိုပဲရေချိုးခါနီးဘော်လီချွတ်တဲ့အခါ နို့ခိုးကြည့် သေးပေါက်တဲ့အခါဖင်ခိုးကြည့်နဲ့….အမဗိုက်ကြီးလာတော့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်လဲပြောင်း ကျနော်မျက်လုံးထဲမှန်းထူလို့မရတော့တာနဲ့… နောက်တယောက်ကိုရှာပြီးမှန်းထုရတော့တာပေါ့ဗျာ….. ခလေးမးမွေးပြီးအမနို့ကြီးက ၂ဆလောက်ကြီးလာတယ် …ဘော်လီတောင်မဆံ့ဘူးဆိုပြီးမဝတ်လိုဘူ…အမက ခေါင်းနေစွတ်ဝတ်ရတဲ့ ဆွဲသားအကျီးကို ဝတ်တတ်တယ်…ခလေးလဲတနှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ အမ ဖက်ကောက်သွားနေပြီ…. အမ တို့ဖက်ထုံးတွေကကျနော်တို့တောင်ယာတဲမှာထားတာ….ဖြစ်ချင်တော့ရွာမှ အလှူတခုရှိတာနဲ့ဖက်ကောက်သမတွေနားကြတယ်… တဲ့မှာလဲကျနော်တယောက်တည်း တဲစောင့် အကိုတို့ကမနက်မှပြန်လာကြမှာ…အမက ဖက်အရေးကြီးလို့တဲ့ တယောက်တည်းလာကောက်တာ…နေမွန်းတည့်တော့ အမတဲဘေးဖက်ထုံးကိုချကာ ရေဝင်သောက်ယက်ခပ်နားနေရင်း မောလိုက်တာငမင်းရာ တယောက်တည်း ဘယ်သူမှလဲအဖော်မရှိဘူးဒီနေ့ ရွာအလှူဆိုတော့ နင့်အကိုကလဲထမင်းကျွေးတဲ့…
ခလေးတော့နို့ဆာနေပြီထင်တယ်…နို့တွေလဲတငိးနေပြီ…ဟုတ်တာပေါ့ အမ အကျီအောက်မှာ ခလေးခေါင်းလုံးလောက်ရှိတဲ့နိုးကြီးနှစ်လုံးအယ်ထပြီးတောင့်နေတာ..နို့သီးခေါင်းလေးတောင်ထောင်နေတယ်…စောစောကသတိမထားမိ ကျနော်က တဲဘေးလျိုထဲကစမ်းချောင်းထဲရေချိုးမလို့ အပေါ်အကျီချွတ်ထားပြီး ဘော့လုံးကန်ဘောင်းဘီအဖြူနဲ့ အတွင်းခံကမပါတော့ အမနို့ကြီးမြင်ပြီး မို့မှောက်ထလာပြီ… မရတော့ဘူး ရေမြောင်းထဲကိုထသွားတော့မှ အမ ဗိုက်ဆာရင်ထမင်းစားလေ ကျနော်ရေသွားချိုးဦးမယ်…အေးစားမယ် ခဏနားခြေလက်ဆေးပြီး… ကျနော် ရေတယောက်ကကျနေတဲ့ရေအေးအေးအေး ရေစိမ်ရင်းလီးကြီးကိုဆွနေမိ….ရေက တောင်ကျစမ်းရေဆိုတော့ မြောင်းအနက်နိမ့်တဲ့ဘတ်စီးနေတာ..ကျနော်ကမြောင်းထဲမှာဆိုတော့ဘေးကသွားတောငိမမြင်ရ… ရေတခွန်လိုဆိုတော့ ရေကလဲတဝေါဝေါ. အမ ခြေလက်လာဆေးနေတာမသိလိုက်ဘူး…ခဏနေ အသံကြားလို့ အောက်ဘတ်ရွေ့ကြည့်မှာ အမ အကျီကိုမတင်ပြီး တင်းနေတဲ့နို့တွေကိုညစ်ထုတ်နေတာ….ပန်းထွက်နေတဲ့နို့ရည်တွေများ ရေပန်းလေးကျနေတာပဲ..ကျနော်က ဘာလို့ညစ်ထုတ်နေတာလဲအမရ…ခလေးစို့မှာပေါ့….ခလေးနို့တိုက်ချိန်ကျော်နေပြီလေ…နို့ကခလေးမစို့တော့တင်းနေတာ …ဒီနို့ခလေးစို့ရင် ချီးပန်းတတ်တယ်လေ…နင်ကလဲ…နမြောစရာကြီးနော်….နို့က အရသာနွားနို့နဲ့တူလားအမ…
သိဘူးလေဟယ်..ငယ်ငယ်ကဆိုတော့အရသာမမှတ်မိဘူးလေ.. လာခံထားကြည့်ပါးစပ်. ညစ်ပေးမယ်. ကျနော် ရေစိမ်ရင်းအမရေစပ်ကနေ ကုန်းညစ်နေတဲ့နို့ရေကိုပါးစပ်ဟ ခံလိုက်တယ်.ပါးစပ်ထဲသိပ်မရောက်…မျက်နှာတွေပွကုန်တယ်နို့ရေတွေနဲ့ အမကလဲ ဗိုက်ထဲမှမဝင်တာ…သိဘူး…စုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး နို့ကြီးကို ပင့်ကခလေးနို့စို့သလိုစို့လိုက်တယ်…..ညှီတယ်.အရသာကြီးက ဟဲ့တော်တော့ သူများတွေမြင်ကုန်မယ်.ဒီနေ့ဘယ်သူမှလာပါဘူးအမရယ်..အမ ရေချိုးလိုက်လေ …ဟဲ့ မသာ ဂျပန်ချိုး ချိုးရမှာလား …ငါ့အဝတ်ပိုမပါတာကို.ချိုးပေါ့ ရော့ပုဆိုး ဝတ်ချိုးချင်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ယာတဲလဲမရှိသလို ကိုယ့်တဲတစ်တဲပဲရှိတော့ ကိုယ့်ခြံကိုယ့်ဝန်းလိုဖြစ်နေပြီ.. အမကလဲ အရင်တခါ မြင်ဖူးထားတာကို ဒီတိုင်းချိုးလိုက်ပေါ့ လန်းသွားတာပေါ့…အေး ဟယ် ပူလဲပူတယ် …ချိုးမယ် …အဝတ်အစားတွေချွတ်ပြီးရေထဲဆငိးလာတာ ….ဘာမှဝတ်မထားပဲ ဖင်ကြီးရင်ကြီး ကျနော့်ထက်၂ဆလောက်ပိုကိတ်နေတဲ့အမ ရေမြောင်းထဲဗြွမ်းဆိုခုန်ဆင်းပြီး ရေငုတ်နေတာပေါ့….အမရေငုတ်ပြီး ဗြွန်းဆို ပေါ်လာချိန်မှာတော့ အမရဲ့တင်းကားနေတဲ့နို့ကြီးရယ် ဆီခုံကအမွှေးမဲနက်နက်အောက်က စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကိုစိုက်ကြည့်ရင်
မနေတော့ပဲ….အမကိုသိုင်းဖက်က အမနို့ကြီးတွေကို ကုန်းစို့တော့တာပဲ…ဟဲ့ အို ဟဲ့သူများတွေမြင်ကုန်မယ်လေ….မရတော့ဘူးအမရာ မြင်လဲမတက်နိုင်ဘူး ကျနော့်လီးက ပေါက်ထွက်တော့မယ်…. အမ ကျနော့်လီးကိုငုံ့ကြည့်ပြီး ဘောင်းဘီ အဖြူအောက် အမြောင်းကြီးထကာ ဖောင်းကားနီးသောကျနော်လီးကြီးကိုကြည့်ပြီး ဒါဆိုလဲမြန်မြန်လုပ်ဟယ် ငါကြောက်တယ်… သူများတွေသိကုန်မှာ…. ခုနက ညှီတယ်ဆိုတဲ့နို့ရည်တွေကို ပါးစပ်ပြည့်အောင် စို့လိုက်မျိုချလိုက် အမ စောက်စိလေးကိုပွတ်လိုက်နဲ့ ကျနော် မထိန်းနိုင်တော့ဘူး…. အမကို ကမ်းပါး ကျောက်နံရံပေါ် မှီခိုင်းပြီး ကျနော်နောက်ကနေ အားကုန်ဆောင့်တော့တာပဲ အမ လဲ ဟင်း နာနာဆောင့်ပါငါ့မောင်ရယ် အမ ခံနိူင်တယ်…နင့်အကိုက ခုဆိုမူးပြီးအိပ်တာများတယ်….ငါ့ကိုမလိုးတော့ဘူး…အား ကောင်းလိုက်တာဟယ် ….အသေဆောင့်အားမနာနဲ့ ….ငါ့နို့တွေပန်းထွက်နေပြီ… အား ကောင်းတယ်…အား ဆောင့်ဆောင့် အား …ရေထဲစိမ်လိုက် လိုးလိုက်နဲ့ တြွဗွန်းဗြွန်းပဲ….ငမင်း ဆောင့်ပေး
ငါ ကောင်းနေပြီး အားအားအား အမပြီးသွားပြီး တွန့်ပြီး တဆက်ဆက်ဖြစ်သွားကတည်းက ကျနော်လဲ အမကို ဆောင့်ရင်း အမပြီးလို့ထွက်တဲ့အရည်တွေနဲ့လရေကလဲခြေသလုံးထိဆိုတော့ အမအဖုတ်ကအရင်လိူမကြပ်တော့ဘူး ….ဒါကြောင့်အမကိုဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ခိုင်းပြီးကျနော်လီးကိုစုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်…ကျနော် အားမရတော့လို့. လက်နဲ့ထုရင်း အား အမ စုပ်ထား အား ပြီးပြီ ဟူး အားဗြစ်ဗြစ် ပြွတ်….အမ မျက်နှာနဲ့နို့တွေပေါ် အောင်းရည်တွေပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်…..ဒီလိုနဲ့ထမင်းစားရင်း အမ ခုခလေးမွေးတာ စဖုတ်ကြီးအရမ်းကျယ်သွားတယ်နော်… ဘယ်ကလာ ငမင်းရယ်…နင့်အကိုက ဆေးထိုးပြီး သူ့လီးမှာဘောတွေထည့်လာတာ ၄လုံးတောင်ဟဲ့….ငါလဲအစပိုင်းနာပေမဲ့နောကအပိုင်းခံလို့ကောင်းခံချင်ခါမှ နင့်အကိုက မလိုးပေးတော့လို့ ယားနေတာ နင်လုပ်ပေးတာတောင် ငါတော်တော်ခံချင်နေလို့ အားမရဘူး…..နင့်လီးက သေးသွားပြီးတဲ့….ဒါကြောင့်ဆေးထိူးထားတဲ့လီးနဲ့ခံဖူးတဲ့သူတွေကလင်ငယ်မနေဘူးတဲ့….နေရင်လဲလင်ထက်ကြီးတဲ့လီးနဲ့မှဆိုတာ သိလိုက်ပေတော့…….
ကြိုးစားပါဦးမယ်… ကိုကြီး စိတ်ကူးပုံဖော်သည်
စိတျ တှေ ဆောကျ တညျ ရာ မရ